High Quality Canvas Ballet Split Shoes Dhizaina Vagadziri - China Fekitori - Fitdance ballet fekitori.
Imba > DzeBhutsu DzeBhutsu > Yakakwira Hunhu Canvas Ballet Split Shangu
Yakakwira Hunhu Canvas Ballet Split Shangu
Yakagadzwa mu1999ï¼ŒFitdance ballet fekitori uyo ane hunyanzvi mukugadzirwa, kugadzirwa uye kutengesa kwekutamba kupfeka, uye ane mukurumbira mukurumbira muChinese yekutamba juear indasitiri.Zvedu zvikuru zvigadzirwa zvinosanganisira ballet tutu, ballet rokwe, ballet masiketi, kutamba leotard, pancake tutu uye kumwe kutamba kupfeka. Uye shangu dze ballet, tights dze ballet uye zvimwe zvishongedzo. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzimwe nyika uye matunhu senge mhiri kwemakungwa North America, Russia, Australia, Canada, Japan, South Korea, nezvimwewo Uye zvakagamuchirwa zvakanaka nevatengi kumba nekunze.Pane zvigadziko zviviri zvekugadzira kuGuangdong neHubei, Iyo ine vashandi mazana maviri.Vashandi vedu vane vanogadzira emhando yepamusoro, mamaneja uye Vashambadzi izvo zvinogona inishuwarenzi yakakwira sevhisi sevhisi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Yakagadzwa mu1999ï¼ŒFitdance ballet fekitori uyo ari nyanzvi mukugadzirwa, kugadzirwa uye kutengesa kwekutamba kupfeka, uye ane mukurumbira wepamusoro muChina dhanzi juear indasitiri.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira ballet tutu, ballet dress, ballet masiketi, yekutamba leotard, pancake tutu uye kumwe kupfeka kupfeka. Uye shangu dze ballet, tights dze ballet uye zvimwe zvishongedzo. Zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzakawanda uye kumatunhu akadai mhiri kwemakungwa North America, Russia, Australia, Canada, Japan, South Korea, etc.
Uye zvakagamuchirwa zvakanaka nevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Kune maviri mabhesi ekugadzira muGuangdong neHubei, ine vashandi mazana maviri.
Vashandi vedu vane vagadziri vepamusoro, mamaneja uye Vashambadzi izvo zvinogona inishuwarenzi yakakwira sevhisi sevhisi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Paramita dzeBallet Shangu
Zvinhu:1. Kumusoro: Ganda rakapfava, Lining: Cotton, Outsole: Anti-Hasha Suede
Ruvara: Nyama Pink
Nguva yokutora: inenge.Mazuva 10-20
Kutumira nzira:Tsigira Express · Kutakura kwegungwa · Kutakura kwepasi · Kutakura nendege
Zvakanakira Ballet Shangu
1. Jira rakapfava rinotora ziya;
2. Outsole Zvinhu:Genuine Leather;
3. Nyoro Ballet Shangu, Flats Shoes
Mushure mekutengesa sevhisi yeBallet Shangu
Kana chigadzirwa chapera, isu tinotora mufananidzo uye ndokutumira kwauri kuti uzive kufambira mberi kwayo.
Kana yagadzira iyo nhamba yekutumira, isu tinotumira iyo kwauri nekukurumidza sezvinobvira uye ramba uchitevera.
Kana yasvika kwainoenda, tichazokubata zvakare kukuyeuchidza nezve risiti.
Mushure mekuchigamuchira, kana paine chero dambudziko rehunhu hwechigadzirwa, isu tinotaurirana newe zvinoenderana nekukura kwedambudziko, kudzoreredza kuzere kana muripo wakasarudzika.
Q&A yeBallet Shangu
Q1.Iwe uri mugadziri kana ingori kambani yekutengesa?
A1 Tiri nyanzvi inogadzira yekutamba, yevana mbatya uye yevakuru yekutamba. isu tine zvikwata zvehunyanzvi uye zvakakwana zvine makore anopfuura gumi neshanu zviitiko mukugadzira. kugadzira uye kushambadzira.
Q2.Can iwe nditumirei iwo mharidzo? Marii yakadii yemuenzaniso?
Sampuli yemubhadharo ichabhadharwa muiri mutengo wekutengesa, asi isu tinodzosera iyo yekuwedzera muyero mutengo kana iwe ukaisa odha nesu.
A3.Ungatitumire kubvunza kana kondirakiti nezve izvo zvigadzirwa zvaunoda, ipapo isu tinokutumira iwe iwo ruzivo rwezvigadzirwa zvedu. Isu tinopa saizi kududzirwa kwevana madhirezi, iwe unogona kusarudza saizi chaiyo kubva kune saizi chati. Uye kana iwe uine chero dambudziko nezve saizi, unogona kutumira meseji uye utiudze zera, kureba uye huremu, tinogona kukupa rairo rehunyanzvi.
Q4.Can ndingaisa zvinyorwa zvedu / logo padhirezi? / Ndingasarudza ruvara here?
A4 Hongu. Customization inogamuchirwa. Kana iwe uine yako dhizaini, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo uye isu tinogona kuita sampuro kwauri.
Q5: Zvakadii mushure mekutengesa sevhisi?
A5.1) Zvese zvigadzirwa zvichave zvakaomarara mhando zvakatarwa zvisati zvarongedzwa. 2) Al zvigadzirwa zvichave zvakazara zvakazara pamberi pekutakura. 3) Kana chero kusagutsikana, iwe unowana yedu yekukurumidza mhinduro uye mhinduro.
Q6. Ndeupi rudzi rwewarandi kana vimbiso yaunopa pane vako vana yekutamba kupfeka?
A6 Tinotengesa zvigadzirwa zvine mhando yepamusoro uye zvakavimbika. Tisati tatumira, vedu Q & C vashandi vanozoita yakatarwa cheki yemapfekero ega ega kune vatengi vedu kuti vaone mhando yepamusoro uye vasingatombotumira madhirezi akakuvara kana asina kunaka.
Hot Tags: Yakakwira Hunhu Canvas Ballet Split Shangu, Dhizaina Vagadziri, China Fekitori, Yakasarudzika, Yakakwira-mhando, Yakaderera Mutengo, Vatengesi
Nyoro Ballet Bhutsu
ballet canvas shangu
Ndapota Inzwa wakasununguka kupa kubvunza kwako mune fomu iri pasi apa. Isu tichakupindura iwe mumaawa makumi maviri nemana.
Canvas Lace Splice Ballet Shangu
Pu Leather Ballet Bhutsu
Canvas Ballet Shangu
Leather Musoro Ballet Shangu
Satin Ballet Shangu
Nyanzvi Canvas Ballet Shoes-1700